१७ जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा पढाउँदै स्थानीयतह
पुस २२, रुकुम पश्चिम । ऋण अनुदानमा दुई जनालाई पाइलट विषय पढाएको आठबीसकोट नगरपालिकाले अरु १७ जना विद्यार्थीलाई विभिन्न प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराइरहेको छ ।
नगरपालिकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न १२ जना छात्र र ५ जना छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेको हो ।
जेहेन्दार भए पनि गरीबीका कारण पढ्न नसकेका विद्यार्थीहरु तीन वर्षे कोर्ष अध्ययनका क्रममा छन् । २ जनाले हेल्थ एसिस्टेन्ट र ३ जनाले इन्जिनियरिङको अध्ययन गरिरहेका छन् भने ३ जनालाई सब इन्जिनियर पढाइरहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, २ जनाले कानून, ३ जनाले आईटी, २ जनाले कृषि र २ जनाले स्टाफ नर्स अध्यययन गरिरहेका हुन । कोर्ष पूरा गर्दा लाग्ने कलेजको सम्पूर्ण शुल्क तिरेर विद्यार्थीलाई पढाइरहेको नगर उपप्रमुख गीता नेपालीले बताइन् ।
उनका अनुसार खाने र बस्ने व्यवस्था भने विद्यार्थी आफैंले गरिरहेका छन् । पढ्न चाहेको विषय र प्रवेश परीक्षा पास गरेको प्रमाणसहित छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिएकामध्येबाट विद्यार्थी छनोट गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
नगरपालिकाका अनुसार २०७५ मा ५ र २०७६ सालमा १२ जनालाई छात्रवृति सुविधा दिइएको हो । यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन ।
‘कुनै पनि विषय र कोर्ष पढ्न चाहनेहरुको पढाइ पैसाकै कारण रोकिएको छैन,’ नगरप्रमुख गोरख केसीले भने, ‘शिक्षा पाउनु सबैको मौलिक हक हो, हामीले अभियानकै रुपमा वर्षेनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं ।’
उनका अनुसार १७ जना विद्यार्थी पढाउन नगरपालिकाले रू. ३९ लाख ४४ हजार खर्च गरेको छ । जसमा एक जना विद्यार्थीले रू. १ लाखदेखि ३ लाख ५० हजारसम्म सहयोग पाएका छन् ।
प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका आफैं अघि सरेको केसीले बताए । ‘काम गर्ने क्रममा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखियो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकामै यस्तो जनशक्ति तयार पारेपछि सजिलो होला भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।’